OneDrive dia maniry antsika hanadino mandrakizay ny taratasy amin'ny fanavaozana farany farany azy | Vaovao IPhone
Amin'izao fotoana izao, ny serivisy fitahirizana rahona dia nanjary sakafonay isan'andro ary ho an'ny mpampiasa maro dia ampahany lehibe amin'ny fiasana izy ireo, na avy any an-trano izany, na avy amin'ny birao na na aiza na aiza misy antsika. Eo amin'ny tsena isika izao dia afaka mahita ny Dropbox, Google Drive, Mega, Box ary OneDrive. Izy rehetra dia manolotra antsika safidy fitahirizana samihafa fa tsy mitovy asa. Ny orinasa tsirairay dia nanapa-kevitra ny hanampy andraikitra hafa izay mihoatra ny fahafahany manontany antontan-taratasy tsotra amin'ny alàlan'ny finday na tablette. Ary Microsoft dia iray amin'izy ireo miaraka amin'ny OneDrive, ny serivisy fitahirizana rahona avy amin'ireo bandy avy ao Redmond.
Microsoft dia mandefa tsindraindray, farafahakeliny indray mandeha isam-bolana, fanavaozana ny fampiharana ho an'ny iOS, fanavaozana izay, ankoatry ny fanatsarana ny fiasa sy ny fahombiazan'ny fampiharana, dia manolotra asa vaovao, asa izay mahatonga ny fampiharana OneDrive ho fampiharana ilainay miankina betsaka amin'ny rahona. Ny fanavaozana farany ny fampiharana OneDrive ho an'ny iOS, te-hanadino tanteraka ny momba ny taratasy isika, noho izany dia nanampy endri-javatra vaovao antsoina hoe Digitization izay ahafahantsika mi-scan ny solaitrabe, ny antontan-taratasy ary koa ny carte de crédit amin'ny fomba tena mora ary misy valiny tena tsara.
Fa ankoatr'izay, ity fanavaozana ity dia ahafahantsika mijery avy hatrany ny antontan-taratasy Word, Excel ary PowerPoint ao amin'ilay application miaraka amin'ireo mpanara-maso mialoha, mety indrindra rehefa mitady rakitra sy ny rafitry ny fitahirizantsika amin'ny anarana isika, mamela zavatra maro irina. Ny zava-baovao dia mifandraika amin'ny fiasa amin'ny iPad sy ny rakitra an-tserasera, satria manomboka izao dia hisokatra amin'ny efijery feno izy ireo, hampitombo ny habeny, izay manatsara ny famokarana ataontsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » OneDrive dia maniry antsika hanadino mandrakizay ny taratasy amin'ny fanavaozana farany